Ko Khit, Author at Khitamyin - Page6of 161
အိန္ဒိယပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား မြန်မာအာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင်ကို ဖိတ်မယ်ဆိုတာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း အိန္ဒိယ နိုင်ငံခြားရေး ပြောခွင့်ရ ပယ်ချ
November 24, 2021Ko Khit0 Comments
အိန္ဒိယပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား မြန်မာအာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင်ကို ဖိတ်မယ်ဆိုတာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း အိန္ဒိယ နိုင်ငံခြားရေး ပြောခွင့်ရ ပယ်ချ လာမယ့်နှစ်၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီလထဲ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ နှစ်စဉ် ခမ်းခမ်းနားနား ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့…
မှတ်ပုံမတင်ထားတဲ့ ပရဟိတအသင်းတွေ မှတ်ပုံတင်ဖို့နှင့် လိုင်စင်မဲ့ကားတွေ မသုံးကြဖို့ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ ညွှန်ကြားဟု သိရ
မှတ်ပုံမတင်ထားတဲ့ ပရဟိတအသင်းတွေ မှတ်ပုံတင်ဖို့နှင့် လိုင်စင်မဲ့ကားတွေ မသုံးကြဖို့ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ ညွှန်ကြားဟုဆို လိုင်စင်မဲ့ကားတွေကို ပရဟိတအသင်းတွေအနေနဲ့ မသုံးကြဖို့နဲ့ မှတ်ပုံမတင်ထားတဲ့ ပရဟိတအသင်းတွေမှတ်ပုံတင်ဖို့ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက ညွှန်ကြားစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ မှတ်ပုံမတင်တဲ့ ပရဟိတအသင်းတွေကို…
ပြည်သူ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ စကစခေါင်းဆောင်ပြော
ပြည်သူ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ပြော ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၄ ပြည်သူ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က…
စစ်တပ်က စနစ်တကျ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြည်သူများကို တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်နေမှုကို ကုလညီလာခံမှာ တင်ပြပြီး နိုင်ငံတကာကို အကူအညီတောင်းခံလိုက်တဲ့ ဦးကျော်မိုးထွန်း
စစ်တပ်က မြန်မာပြည်သူများကို စနစ်တကျ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်နေဟု ကုလသမဂ္ဂညီလာခံတွင် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းတင်ပြ၊ နိုင်ငံတကာကို အကူအညီတောင်း ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၄ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်တပ်က ပြည်သူများကို…
ဖျက်သိမ်းရန် တရားရုံး၌လျှောက်ထားလိုက်တဲ့ မြန်မာဘီယာထုတ်သည့် ဂျပန်- မြန်မာ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ
November 23, 2021Ko Khit0 Comments
မြန်မာစစ်တပ်ပိုင်၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်အများပိုင်ကုမ္ပဏီ UMEHL နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံက အဖျော် ယမကာလုပ်ငန်းကြီး ကီရင် (Kirin Holdings) တို့ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး မြန်မာဘီယာ အပါအဝင် ဘီယာ အမှတ်တံဆိပ်…
CDM စစ်သားများကြောင့် စိတ်ဓာတ်အား ပိုမို့ချိနဲ့လာသည့် တပ်မတော်ကြီး
ငယ်ငယ်လေးထဲက စစ်သားကြီးဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ အောင်မျိုးထက်ဟာ ကြီးလာတဲ့အခါ တကယ်လည်း ဗိုလ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ စပြီး တပ်ထဲဝင်ချိန်မှာ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ဖို့လို့သာ ထင်မှတ်ခဲ့ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေအချင်းချင်း ပြန်တိုက်ရမယ်လို့ မထင်ခဲ့မိပါဘူး။…
စစ်မှူးထမ်းဟောင်းတွေကို တာဝန်ပြန်မထမ်းဆောင်ရင် ပင်စင်လစာမပေးဘူးလို့ SAC အကျပ်ကိုင်နေ
စစ်မှူးထမ်းဟောင်းတွေကို တာဝန်ပြန်မထမ်းဆောင်ရင် ပင်စင်လစာမပေးဘူးလို့ SAC အကျပ်ကိုင်နေ စစ်ကိုင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရေစကြိုမြို့မှာ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကို SAC က တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းနေပြီး မလိုက်နာသူတွေကို ပင်စင်လစာမပေးဘူးလို့ဆိုကာ…
” လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ပြီး တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ မြန်မာစစ်ကောင်စီကို တရားဝင်မှု့အတွက် ပေကျင်း ( တရုတ် ) ရဲ့ ကြိုးစားမှု့ဟာ အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုပါ ရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်ဖို့ အားထုတ်နေတာပါ ။ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့…
လျှပ်စစ်ခရီးသည်တင်ကားတွေ ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိနိုင်ဖို့ SAC စီစဉ်နေဟု ဆို
လျှပ်စစ်ခရီးသည်တင်ကားတွေ ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိနိုင်ဖို့ SAC စီစဉ်နေ ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃ လျှပ်စစ်ခရီးသည်တင်ကား (E-Bus) တွေ ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိနိုင်ဖို့အတွက် SAC လက်အောက်ခံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်…
မြန်မာ ပြည်တွင်းစစ်ကြီးနဲ့အတူ UN…? R2P ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ဘယ်အချိန်မှာ ဝင်လာနိုင်သလဲ
မြန်မာ ပြည်တွင်းစစ်ကြီးနဲ့အတူ UN…? R2P ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ဘယ်အချိန်မှာ ဝင်လာနိုင်သလဲ ကျနော်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်….အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း မအလကိုတိုက်ဖို့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူညီကိုအရမ်း မျှော်လင့်ခဲ့ကြဘူးပါတယ်။အတွင်းကျကျလေ့လာမိတဲ့အခါ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးနဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်လာမှု ကိစ္စဟာ.. အရမ်းရှုတ်ထွေးပြီး ထင်သလောက်မလွယ်ကူကြောင်း…